Ukubonisana Kwezezimali Nokuvikeleka - I-RatingFarm
Imisebenzi Yezokwelulekwa Kwezezimali Nezokuvikeleka
I-ratingFarm yinkampani ekhethekile kwizinsiza ze ukubonisana ngebhizinisi nokuvikeleka womsebenzi ngokwezezimali futhi cha. I-ratingFarm yakhelwe ukunikeza noma iyiphi insizakalo noma / futhi izeluleko zezezimali kumabhizinisi azo zonke izinhlobo nosayizi. Lapho ukuphepha, ikakhulukazi, kungumsebenzi we ubunjalo bezezimali okuhlose ukuguqula izinsimbi zezezimali ayidluliseli kuzinto ezisetshenziswayo zezezimali, futhi ngenxa yalokho kuyaxoxiswana. Amandla enkampani ukuzimela okuvumela ukuguquguquka, ukuzenzela izinqumo kanye nethuba lokubambisana nenethiwekhi enkulu yabalingani bezentengiselwano. Le nkampani iyakwazi ukunikela, ngenxa yeqembu elisondelene labasebenza kahle, Izinsiza zokuphatha ekugcineni okukhulu, ukuqaliswa kwe isikhwama, ukuphathwa kwengqalasizinda nokusekelwa, kanye neminye imisebenzi eminingi.
Abahlanganyeli, ababambisene nabo kanye nabaphathi be-Rating Farm banemfanelo kanye nokuqeqeshwa emkhakheni we ukuphathwa kwe ukutshalwa kwezimali, ulwazi olunzulu ngomkhakha we imali kanye nerekhodi elifakazelwe elicebile ngokuqeqeshwa njalo. Inhlangano yangaphakathi ye- I-ratingFarm inikeza amakhasimende izinga eliphakeme lokucaca nokuvumelana nezimo, ukuphathwa okuhlelekile nokuxhaswa njalo.
Ukuhlolwa kwesilinganiso senkampani
Ukulinganiswa kwebhizinisi kuyinkomba yokuthembeka kwenkampani nokuqina kwayo.
Sinikeza ukwesekwa ochwepheshe
ukukuqondisa ekuhlanganiseni kwe
Izingcingo zokuthuthukisa inkampani yakho.
Ukuhlaziywa kwebhizinisi nokuhlela
Siqondisa ibhizinisi lakho ekubambeni iqhaza
Izingcingo zaseYurophu ngezimali
Ngaphezu kokwenza ukucubungula nokuhlola
ezinkampani, sinikezela ngezinsizakalo zokuphatha.
Kuningi i nezinsizakalo zebhizinisi Kunikezelwe kumakhasimende akhethiwe obakhelwe ubuhlobo obuhlala njalo obususelwa ekuthembekeni. Le nkampani futhi inethiwekhi ebanzi yezinkampani zokubambisana esebenza nayo. I-ratingFarm yinkampani ekhethekile izinsiza zezokweluleka ngezimali nokuphepha futhi cha. I-ratingFarm yasungulwa ukuhlinzeka noma iyiphi insizakalo yezezimali noma / nezeluleko. Amandla ethu ukuzimela okusivumela ukuba sivumelane nezimo, amakhono okwenza izinqumo ezindala futhi sibambisane nenethiwekhi enkulu yabalingani bebhizinisi.
Iqembu lochwepheshe abavela ku ukuhlela amasu ezinkampani kusetshenziselwa ukunikela Izinsiza zokuphatha ukugcina okukhulu, ukusebenzisa iphothifoliyo, ukuphathwa kwengqalasizinda kanye nokusekelwa. Abalingani bebhizinisi kanye nabaphathi banemfanelo kanye nokuqeqeshwa ngale ndaba ukuphathwa kokutshalwa kwezimali, ulwazi olunzulu ngomkhakha we imali kanye nerekhodi elifakazelwe ku Izaziso zoxhaso bobabili bezwe nabaseYurophu. Ukwakhiwa kwe I-ratingFarm inikeza amakhasimende izinga eliphakeme lokucaca nokuguquguquka, ukuphathwa okuhle nobungcweti obukhulu obuhlanganisiwe eminyakeni yempumelelo.